FIVAROTANA mafana: RUBBER COATED METAL
Nanangana ny departemanta vy mifono vy amin'ny 2005 izahay, tamin'io taona io ihany, nanafatra ireo fitaovana ilaina avy any Frantsa, Alemana ary Japon. Tamin'ny 2011, ny orinasa dia nahomby tamin'ny famolavolana ny takelaka vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny metaly any Shina, ary nanangana ny kodiarana vita amin'ny vy vita amin'ny otrikaina voalohany ...
MANDRESY NY FITSABOANA NY API STANDARD 6FB
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-31
Famakiana lehibe ho an'ny vokatra tsy misy asbestos fibres ity handalo ny fitsapana afo an'ny API Standard 6FB, Fanontana fahaefatra, 2019 amin'ny datin'ny 5 martsa 2021. Ny fitsapana dia nataon'i Yarmouth Research and Technology, LLC, izay manam-pahefana ary laboratoara fanandramana matihanina manerantany. Th ...
VAHAOLON'NY FITSABOAN-DALAM-BOLA SUPERIOR, NY ANJARA REHETRA
Ny akora famehezana dia votoatin'ny fiarovana sy kalitao amin'ny fiainana maoderina eran'izao tontolo izao. Ny mpamboly anay dia mpamokatra fitaovana gasket ho an'ny karazana ravina tsy asbestos ary karazana metaly mifono vy. Manana tantara lava be amin'ny famokarana sy famolavolana fitaovana famehezana izahay hatramin'ny taona 1991. Ankehitriny dia izahay no famou ...
NANORATRA NY VATO FAHASALAMANA FENO RUBBER WE COATS
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-17
Fitaovana matevina vita amin'ny fingotra matevina vita amin'ny metaly mifangaro vy mifototra amin'ny lovia vy mangatsiaka miaraka amin'ny fonosana fingotra NBR amin'ny lafiny roa amin'ny alàlan'ny teknolojia fanodinana mandroso. Izy io dia mety amin'ny shimins absorption shock, shims damping shims, damper vibration ho an'ny rafitry ny frein sy ny fampiasa amin'ny lohataona, sns ...
Tsy mandeha matetika ny lohan'ny vatan'ny motera sy ny famoahana ny rivotra. Ny fandoroana ny gasket amin'ny lohan'ny varingarina dia tena hanimba ny toe-piainan'ny motera, na tsy hiasa mihitsy aza, ary mety hiteraka fahasimbana amin'ireo faritra na faritra misy ifandraisany; amin'ny tsindry famatrarana sy herinaratra ...
1. Tsy azo hamarinina Ny fingotra synthetic dia afaka manova ny endriny toy ny tsiranoka. Mazava ho azy, tsy afaka mikoriana. Rehefa nanjavona ny hery manapotsitra izay nanindry ny endriny dia afaka miverina amin'ny endriny tany am-boalohany izy (izany hoe ny volan'ny gasket dia tsy miova mandritra ny fizotran'ny famatrarana. Ova, ...
Inona no hatao raha misy olana amin'ny gasket lohan'ny varingarin'ny motera
Rehefa simba na tsy voaisy tombo-kase mafy ny gasket lohan'ny varingarina dia tsy afaka mandeha ara-dalàna ny motera ary tsy maintsy soloina eo noho eo. Ireto ny dingana manokana: 1. Esory ny fonony valizy sy gasket. 2. Esory ny fivorian'ny sandry rocker ary alao ny tehina fanerena. 3. Mamaha tsikelikely a ...
Raharaha maromaro mila fiheverana amin'ny fametrahana gasket
Ny gasket dia ampahany famehezana static izay mamaha ny "fihazakazahana, famoahana, fitetezana ary famoahana". Satria maro ny rafitra famehezana static, arak'ireny endrika famehezana static ireny, gasket fisaka, gasket elliptical, gasket lens, gasket cone, gasket cair, O-peratra, ary ...
Fampisehoana aorian'ny tsy fahombiazan'ny lohan'ny gasket
Raha simba ny fiara eo am-pamiliana dia misy antony maro mahatonga ny tsy fahombiazana, ary mety tsy hahomby ny ampahany rehetra. Inona no hitranga amin'ny tsy fahombiazan'ny gasket lohan'ny varingarina? Homen'ny mpanamboatra anao ny toe-javatra amin'ny antsipiriany. Avelao aho hampiditra azy. Satria ny fiasan'ny lasantsy misy ny sealin ...
Ahoana ny fomba hitsarana ny lasantsy lohan'ny varingarina
Ny tena asan'ny gasket varingarina dia ny fitazonana ny vokan'ny famehezana mandritra ny fotoana maharitra sy azo ianteherana. Tokony hasiana tombo-kase tanteraka ny entona misy hafanana ambony sy avo lenta ateraky ny varingarina, tsy maintsy asio tombo-kase ny rano mangatsiaka sy ny menaka motera miaraka amin'ny tsindry sy ny tahan'ny mikoriana miditra ao ...
Inona no hatao raha misy olana amin'ny gasket lohan'ny varingarina
Rehefa simba na tsy voaisy tombo-kase mafy ny gasket lohan'ny varingarina dia tsy afaka mandeha ara-dalàna ny motera ary tsy maintsy soloina eo noho eo. Ireto ny dingana manokana: 1. Esory ny fonony valizy sy gasket. 2. Esory ny fivorian'ny sandry rocker ary alao ny tehina fanerena. 3. Mamaha sy manaisotra ...
Ny orinasa dia mitroka ny filozofia famolavolana iraisam-pirenena mandroso sy manamboatra teknika ary manao fanavaozana tany am-boalohany.
08.04,21Jona 16, 2017
31.03,21Jona 16, 2017
VAHAOLON'NY FITSABOAN-DALAM-PANAHY, karazana rehetra ...
23.03,21Jona 16, 2017
EFA NAMOA NY RUBBER COATING RU izahay ...
17.03,21Jona 16, 2017
Takelaka Gasket Non Asbestos, Takelaka fingotra tsy asbestos,